China E-1 Intelligent Amanzi Ukondla Ukwakhiwa kanye Factory | Amahlaya
Kungani izilwane ezifuywayo zidinga abaphakeli bamanzi abahlakaniphile?
Ngaphansi kwezimo ezijwayelekile, abanikazi bezilwane basebenzisa izitsha ezijwayelekile zezilwane ukuhlinzeka ngamanzi ngezidingo zokondla. Kepha okudingeka kwaziwe ngokusobala ukuthi ngabe umthombo wamanzi okuphuza wesilwane uhlanzekile futhi unenhlanzeko, okuzothinta ngqo impilo yesilwane. Futhi kaningi sithola ukuthi izilwane ezifuywayo zimelana kakhulu namanzi asele isikhathi eside. Lokhu kungenxa yokuthi amanzi endishini yezilwane ezifuywayo awahambi, ngakho-ke kulula ukugxilisa ukungcola emanzini isikhathi eside futhi ukungcola okusemoyeni nakho kuzokhishelwa ngaphezulu kwamanzi. Bese izala amagciwane.
I-E-1 Intelligent Water Feeding yenzelwe ukubhekana nalezi zinkinga futhi izothuthukisa indlela abanikazi bezilwane abaphatha ngayo izilwane ezifuywayo.
Isikhala seso lokungeniswa kwamanzi
Izinhlangothi ezintathu ziyawezwa amanzi, futhi amanzi angakhiqizwa ngokuzenzakalela ngaphakathi kwe-30cm kusuka kunoma yiluphi uhlangothi lwangaphambili, kwesobunxele nangakwesokudla, okuvuselela intshisekelo yesilwane emanzini okuphuza. Lapho isilwane sishiya uhla lokuzwa, ipompo lamanzi lizoyeka ukusebenza ngemuva kwemizuzwana eyi-10
Ukuhlunga okune, okusabalalisa ukujikeleza
Ukweqisa kwe-calcium ne-magnesium ions emanzini kuyisici esibalulekile samatshe emfuyo yomchamo nezinye izinkinga zomchamo, nezinto ezinobungozi ezinjenge-chlorine eyinsalela kanye nama-ion esindayo asemanzini abeka impilo yezilwane ezifuywayo engozini ngqo. Ngakho-ke, lo mkhiqizo usebenzisa ukuhlanzwa okujulile okuphindwe kane nokuhlunga ukuthuthukisa ikhwalithi yamanzi ethambile futhi uvumele izilwane ezifuywayo ukuthi ziphuze amanzi aphilile: ama-tray meshes, ukuhlunga kokuqala, ukuvimba ukungcola okukhulu kwevolumu njengezinwele; ukotini wokuhlunga wesibalo esikhulu ukuhlukanisa izinhlayiya ezincane ezifana nesihlabathi nokugqwala; ukhukhunathi Igobolondo elicushiwe lithatha i-chlorine eyinsalela futhi lisuse iphunga; i-ion exchange resin ihlunga ngokujulile i-ayoni esindayo, njll.
Idizayini yokusetshenziswa engaxhumekile
Ngemuva kokushaja nge-USB, ingasetshenziswa ngaphandle kokungena ngaphakathi ukuvimbela izilwane ezifuywayo ukuthi zingalumi futhi zilimaze ukuphepha kwezilwane ezifuywayo. Ukushaja amahora amane kungasetshenziswa ngokuqhubekayo amahora angu-7, okubekwe eceleni kuze kube yiviki elingu-1
Ukusetshenziswa kwamaphampu wamanzi ahlangabezana nezindinganiso zaseYurophu nezaseMelika kuvimbela ukushisa okomile, ukusetshenziswa okuphansi nokonga amandla, futhi kuthuthukisa ikhono lokuthula, likwenze kuqine ngokwengeziwe. Iphampu lamanzi elithule elinamandla aphansi ama-5V linciphisa ngempumelelo umsindo ogelezayo wokugeleza kwamanzi kuye kuma-decibel angama-40
● Ukulawulwa kwekhwalithi okuqinile ukuqinisekisa ukuthi isilinganiso esifanelekayo semikhiqizo yezilwane silingana no-100%
● Ifektri intengo yokuthengisa eqondile, inikezela ngentengo yokuncintisana kakhulu yabathengisi
● Kutholakala edolobheni elibekezelela ngokweqile izilwane ezifuywayo, futhi iningi leqembu le-R & D belilokhu lixhumana nezilwane ezifuywayo kusukela ebuntwaneni, okusho ukuthi singakhetha kangcono futhi sithuthukise imikhiqizo yezilwane
● Nikeza ukunikezwa kwezilwane ezisezingeni eliphakeme nokwengezwe ngenani eliphakeme, inzuzo engcono yokuncintisana
● Bambisana nendawo yokugcina izimpahla yaphesheya e-United States, Canada, Germany naseNetherlands, engaqinisekisa ukulethwa okusheshayo kwesampula noma iqoqo elincane
● Insizakalo yobungcweti yangemva kokuthengisa, enikezela ngosizo lobuchwepheshe online kanye nesevisi yokubuyisa ehlelekile
Langaphambilini E Electric Pet Nail Sander
Olandelayo: E-2 Umthombo Wokuphuza i-Apple